Angikholwa ukuthi umnotho ubanjwe ngumuntu oyedwa - Gigaba | isiZulu
Iqembu elisha limelene nezitabane
Buka: Uhamba nqunu uBuhle Mkhize
Inhlangano yezitabane iziklomelisa uMalusi Gigaba
Johannesburg - UNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba ubize isithangami sabezindaba lapho bekudingidwa khona ngezinguquko ezenzeka kulo Mnyango wakhe omusha.
Lo Ngqongqoshe uthi wezwa ngoLwesihlanu ukuthi iS&P Global izokwehlisa izinga leNingizimu Afrika kwezomnotho futhi ngeke ihlehle kuleso sinqumo sayo.
"NgoMsombuluko ngiveze ukuthi ngibe nezingxoxo nezinkampani ezihlaziya umnotho wezwe, besengibikelwe ngesinqumo se-S&P futhi angizange ngixhumane nabo ngenxa yokuthi bese besithathile isinqumo sabo," esho.
UGigaba unxuse abezindaba ukuba bangagxili ezintweni esezadlula, bebhebhethekisa umlilo wamaphepha ngokuthusa abantu kodwa kumele babheke phambili, balekelele ekwakheni umnotho nasekuthuthukiseni lo mnotho.
UGigaba ubuye wathi ziningi izizathu ezenza ukuba kucwile umnotho, ngakho-ke akungabhekwa uhlangothi olulodwa kube sengathi yilona lodwa olwenza isimo sibe sibi ngale ndlela.
"Siyazi ukuthi isimemezelo sangoMsombuluko sisibuyisela emuva kakhulu njengezwe, kodwa esikhundleni sokuthi sihlale sigxile ezinkingeni esibhekene nazo, kumele siphokophelele phambili. Kumele siqhamuke namasu okukhulisa umnotho nokuqinisa ubudlelwano esinabo nabatshalizimali," kusho uGigaba.
OLUNYE UDABA:UGigaba uthe uzohlangana nabaqasha abafike ngokungemthetho kuleli
UNgqongqoshe wezeziMali KwaZulu-Natal, uBelinda Scott, uyihlabe wayihlikiza eyabagxeka uGigaba ngokuthi asimfanele lesi sikhundla.
UScott usho lokhu esemcimbini wezemidlalo yezikole zaku-Ward 9 eMolweni ngesikhathi ephendula imibuzo ngezinguquko ezenziwe nguMengameli uJacob Zuma.
“UGigaba ungomunye woNgqongqoshe abasebenza ngokuzikhandla futhi useneminyaka engu-15 esebenza. Ngikhuluma-nje ubenikwe izikhundla ezimbili ezinzima, wafike wenza into yamehlo kuzo.
“Ngalokho ngithi kubantu abamnike ithuba uGigaba sebengakhuluma uma sebebone umsebenzi wakhe kulesi sikhundla aqokelwe kusona,” kubeka uScott.
Emizuzwini eyi-35 edlule
Kuboshwe abantu ababili ngodlame oluqubuke eMoses Mabhida Stadium ngoMgqibelo ebusuku ngemuva komdlalo weNedbank Cup obuphakathi kweKaizer Chiefs neFree State Stars.
I-ANC ne-EFF bazobamba izingxoxo zokusebenzisana ngemuva kwesicelo sikaJulius Malema.
OKlebe benza uphenyo ngoZuma kanye noMahumapelo - Umbiko
Lowo owayengumengameli wezwe uJacob Zuma kanye noNdunankulu waseNorth-West uSupra Mahumapelo kubikwa ukuthi bayaphenywa ngoKlebe ngamacala enkohlakalo nokukhwabanisa.